Okuzenzakalelayo Abakhiqizi Bepulasitiki, Abahlinzeki - China Ifektri Elizenzakalelayo lePulasitiki
Umshini omusha wohlobo lwe-CNC wokushisela ishidi lokushisela umshini
Isicelo nesici Uhlobo lokushisela: i-weld evundlile nepayipi eligingqekayo. Uhlelo lokulawula lwamapaneli wokuthinta lwe-PLC, olukwazi ukulungisa ngokuzenzakalela ukushisa, isikhathi nengcindezi ngokuya ngamapharamitha ento esetshenziswayo., Ifanele ukushisela nokugingqa amapuleti e-thermoplastic enziwe nge-HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH …… 2.Control system Nokia PLC, 7-inch color touch screen-Siemens. I-3.Brand entsha ifreyimu edidiyelwe, indlela yokudlulisa ethembeke kakhulu, ezinzile emsebenzini kanye ne ...
I-Application and Feature SUD-BO1530 chungechunge inomsebenzi oqinile ngokusebenza okuhle, okulula ukuyisebenzisa, okuqinile nokuhlala isikhathi eside. Kusetshenziswa kakhulu ngokhuni, ukukhangisa, i-PVC, i-PE, i-PP, i-PPH, i-acrylic, i-aluminium ipuleti lepulasitiki njll. 1.Adopt ifreyimu yomshini osindayo, owakhiwa ngumshini wokugaya wohlobo lwe-CNC, onamandla ngokwengeziwe, ozinzile. Ukunemba okuphezulu kwe-Taiwan umhlahlandlela oqondile, ukunemba okuphezulu kwe-helical gear rack kudlulisa. Ukuzinza okuningi, ukucacisa okuphezulu. Uzimele osekelwayo we-3, qinisekisa ukudluliselwa kokuzinza ...
Okuzenzakalelayo umshini wokusika ishidi lepulasitiki
Isicelo nesici 1.Unique ukusika okuvaleke ngokuphelele, okuphephile nokuhlanzekile. 2. Amandla okulungisa ngokuzenzakalela ijubane lokusika ngokuya ngezinto ezihlukile, ezilula futhi ezilula ukusebenza. 3.Unique othomathikhi yokuhlanza kanye dedusting uhlelo, ukuqinisekisa uthuli kukhishwe ngokuphelele, ukusika kube lula futhi shavings ukuqoqwa kahle; Amasistimu enzwa yesikhundla sangaphambili nangemuva, ashesha futhi anembile ekubekeni; 5.Saw blade Ukupholisa uhlelo, ukuxazulula jamming futhi bayeke be ...
Okuzenzakalelayo sheet sheet butt fusion rolling and bending machine
Uhlobo Lokusebenza Nesici Sokushisela: i-weld evundlile nepayipi eligingqikayo. Uhlelo lokulawula lwamapaneli wokuthinta lwe-PLC, olukwazi ukulungisa ngokuzenzakalela ukushisa, isikhathi nengcindezi ngokuya ngamapharamitha wento esetshenziswayo., Ifanele ukushisela nokugingqa amapuleti e-thermoplastic enziwe nge-HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH …… Isistimu yokulawula i-Nokia PLC, i-7-inch color touch screen-Nokia. Uhlaka olusha sha oludidiyelwe, indlela yokudlulisa ethembeke kakhulu, ezinzile emsebenzini futhi esebenza kahle ekwenzeni ...
Umshini we-plastic sheet butt fusion othomathikhi
Okuzenzakalelayo ishidi ukugoba umshini
Uhlobo Lokusebenza Nesici Sokushisela: ukugoba ishidi lepulasitiki kusuka ku-0-145 °. Uhlelo lokulawula lwamapaneli wokuthinta lwe-PLC, olukwazi ukulungisa ngokuzenzakalela ukushisa, isikhathi nengcindezi ngokuya ngamapharamitha wento esetshenziswayo., Ifanele ukushisela nokugingqa amapuleti e-thermoplastic enziwe nge-HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH …… Isistimu yokulawula i-Nokia PLC, i-7-inch color touch screen-Nokia. Uhlaka olusha sha oludidiyelwe, indlela yokudlulisa ethembeke kakhulu, ezinzile emsebenzini futhi ephakeme e-perfor ...